သူကအဖြူအမဲစန္ဒရားခလုတ်လေးတွေဆိုရင် ကိုယ်ကတီးခတ်သူ....... 🎹
ကိုယ်က Note 📝 တွေသေချာနားမလည်ဘဲ ခလုတ်တွေ ဟိုတို့ ဒီထိ လျှောက်တီးလို့ ဂဂျိုးဂဂျောင်အသံတွေထွက်နေတာ ဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲ …။ ခုတော့ Note တွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်လို့ သာယာငြိမ့်ညောင်းတဲ့ ဂီတသံစဉ်လေး ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီ ….။ အဲသီချင်းကတော့ “Friend “ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါပဲ....။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းလို့ နာရီပိုင်းအတွင်း နားလည်မှုတွေနဲ့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ကန့်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံး ပြိုဆင်းသွားတော့တာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ မိနစ်စက္ကန့်ပိုင်းကလို ရှိူးတိုးရှန့်တန့်ခံစားမှုတွေ အစိုင်အခဲအဖုအထစ်တွေ ညစ်နွမ်းတဲ့အတွေးတွေဟာ တမဟုန်ချင်း အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင် ပပျောက်သွားကြတယ်...။ အရင်လို ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ လေးလံတဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးကိုပခုံးမှာထမ်းထားရတာလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားတယ်လို့ ခံစားလာရတယ်...။ ပြီးတော့ စကားပြောကြတဲ့အခါလည်း Topic တွေကအစ ပြောင်းသွားကြတယ်… ။ အရင်ရက်တွေအထိ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ဖြစ်ပျက်ပြီးသမျှအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပဲ တူးဆွပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်နေကြတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်သွားကြတယ်....။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အယုံအကြည်မဲ့သွားကြလို့ RS ကနေ BFF မဟုတ်ရင် တစ်သက်လုံး မခေါ်မပြော ရန်သူလိုဖြစ်သွားနိုင်ကြတာပဲ...။ ကိုယ်တို့ RS ကနေ BFF အဆင့်ကိုအချိန်ပိုင်းအတွင်း ပြောင်းပစ်နိုင်တဲ့ Skillကိုတော့ လျှော့တွက်မရဘူးဘဲ....။ ဒီကနေ ကိုယ်တို့အနေအထား ဘယ်လို ဆက်ပြီးဖြစ်တည်ကြမယ်ဆိုတာကိုလဲ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ အတူစောင့်ကြည့်နေကြတယ်....။ စောင့်ကြည့်ကာလတွေမှာ အရင်ကအမှားတွေအတွက် တစ်ကြိမ်လောက်ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မိုက်မိုက်မဲမဲ ထပ်မယုံမိဖို့ သတိပေးတာပါပဲ... သတိ သတိ သတိဆိုတာ ပိုတယ်မရှိ...။ BFF ကိုပြောင်းပြီးနောက် ကိုယ်တို့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စကားပြောလို့အရမ်းကောင်းသွားတယ် ဟိုအရင်တွေတုန်းက တွေးခဲ့ဖူး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူစိမ်းနှစ်ယောက်ရဲ့ (without sex) ဆက်ဆံရေးမျိုး.....။ BFF ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ညီဖို့ ဘယ်လောက်ထိ ကိုယ်တို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စောင့်ကြည့်ရဦးမလဲ မသေချာဘူး....။ အချိန်မရွေးပပျောက်ပြယ်လွှင့်သွားနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုး.....။ သဘောပေါက်ဖို့က တည်မြဲခြင်းဆိုတာ မတည်မြဲဘူးဆိုတာပဲ....။
Black spot မိနေတတ်တဲ့ကိုယ့်ကို အလင်းရအောင် အတွေးတွေတချို့သူပြခဲ့လို့ အရိုးစွဲလာခဲ့တဲ့ စိတ္တဇတွေကို ဖြေလျော့ကုစားနိုင်ခဲ့တယ်....။ လက်ခံနိုင်တဲ့အရာတွေကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဇွတ်အတင်း မှတ်ယူသိမ်းထားခဲ့တာဟာ မမှန်ဘူးဆိုတာ လက်ခံနိုင်လာတယ်....။ ချည်ကြိုးမျှင်တွေနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာဆီက ရုပ်သေးတစ်ရုပ်ကို နောက်ကျောကနေ အဆွဲခံထားရသလိုပဲ တကယ့်အစစ်မှန်ကမ္ဘာဆီကို သူက သူသောက်လက်စ စီးကရက်မီးတတို့နဲ့ပဲ ချည်မျှင်တွေကိုဖျက်ချပေးခဲ့တယ်...။ ရုန့်ရင်းဆန်ခက်ထန်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့ သူ့နှလုံးသားက ဒဏ်ရာတချို့ကို ကိုယ်မြင်ခဲ့ရတယ်....။ RS ဘဝမှာတုန်းက မပြောပြဖြစ်ခဲ့ဖူးတာတွေ BFF ဆိုတဲ့ စကားလုံးသုံးလုံးကနေ ဆွဲဟဖွင့်လှစ်လိုက်လို့ ပွင့်ထွက်လာကြတဲ့ ခံစားမှုတွေ လျှို့ဝှက်မှုတွေ အံထွက်မှုတွေပါပဲ.....။
တစ်ခုပြောပြချင်တာက လူဆိုတာ သတ္တဝါတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကြောင့် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း သာသူစားသွား လက်ဦးမှုရယူတာတွေက အမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲ အထူးသဖြင့် R/S တွေမှာပိုလို့တောင်ဖြစ်ကြသေးတာ....။ သူ့အထက်အသာစီးရှိနေမှ သူကိုယ့်ကို စားတာမခံရသလို အမြဲတမ်းသတိနဲ့ဆက်ဆံနေရတာမျိုး တချို့ကိစ္စတွေမှာ ငဲ့ညာထောက်ထားမှုမရှိဘဲ နစ်နစ်နာနာ အထင်မြင်သေးနှိမ်ချပြောဆိုခံရတတ်ကြတာ (အမျိုးသမီးဖက်ကကြည့်ရင်) တချို့ကိုယ့်ချစ်သူရည်းစားကို ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ ခုတုံးလုပ်ပြီး ငွေပေးဝယ်စရာမလိုဘဲ အလိုရှိတဲ့အချိန် ဖရီးကစ်လို့ရတဲ့ လိင်အပျော်မယ်သာသာ သဘောထားတတ်တဲ့ သူမျိုးနဲ့ကြုံဆုံရတဲ့အခါ အဲလိုအနေအထားအရပ်ရပ်ကြောင့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စိတ်ပင်ပန်းဆင်းရဲရတာတွေ(Mental Abuse စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု) နာကျည်းမုန်းတီးစက်ဆုတ်ရွံရှာမှုတွေနဲ့ပဲ လမ်းခွဲရတဲ့အထိ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြရတယ်....။ ဘယ်ဝါဒရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကိုမှ မခံယူချင်ရင်တောင် တန်ပြန်တုန့်ပြန်မှုရလဒ်ကိုတော့ ငြင်းလို့မရပါဘူး ...အဖြူရောင်ပေးရင် အဖြူရောင်ပြန်ရမယ် ညစ်နွမ်းစုတ်ပဲ့တာပေးရင် တလောကလုံးရဲ့ ပစ်ပယ်မှု သောက်ဂရုမစိုက်မှု အယဉ်ကျေးဆုံးစကားလုံးနဲ့ပြောရရင် ဉပေက္ခာတွေပြန်ရမယ် ဒါပါပဲ.....။
သာသူစားကြေးမရှိတဲ့ BFF ဆက်ဆံရေးကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အမြဲ Balance ညီနေတယ် တစ်ယောက်က အားနည်းသွားရင်လဲ တစ်ယောက်က ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်....။ ဒါကြောင့်အမြဲညီမျှခြင်းကျနေတဲ့ Friend နေရာမှာ ကိုယ်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး နေသာထိုင်သာရှိသွားတာပါ.....။ ဒီလောက်ပါပဲ...။
PS: အက်ဆေးရဲ့ သရုပ်ကြွမှုအတွက် Censor စကားလုံးတချို့ ထည့်ဝင်ရေးသားရတာ တောင်းပန်ပါတယ်....စာဖတ်သူတို့....။
Posted by Cameron at 09:07 No comments:
ဒီမနက်ခင်းရဲ့ မြင်ကွင်းဟာ ခါတိုင်းရက်တွေလိုမဟုတ်ဘဲ မှန်ဘီလူးနဲ့ Zoom ဆွဲကြည့်သလို အရာအားလုံးနီးနီးကပ်ကပ် ....။ ဆောင်းအဝင်မနက်ခင်းလေနုအေးကြောင့် လှုပ်ရှားယိမ်းယိုင်နေတဲ့ အုန်းပင်ရွက်ဖျားတွေ ဗာဒံပင်ရွက်ဖားဖားကြီးတွေ အိမ်ခေါင်မိုးတွေ ကြည်လင်ပြာလဲ့တဲ့မိုးသားနောက်ခံနဲ့ ထိုးထောင်မတ်နေတဲ့ အထပ်မြင့်တိုက်တာတွေ စုလတ်မွန်းချွန်းတွေနဲ့ ချွန်ထွက်နေတဲ့ ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တစ်ခုရဲ့အမိုးနဲ့ ပျံသန်းနေကြတဲ့ ငှက်တချို့ဟာ ကိုယ်ကော်ဖီထိုင်သောက်နေတဲ့ ဧည့်ခန်းမှာ ပိတ်ကားရုပ်ရှင်တစ်ခုကြည့်နေရသလိုပါပဲ....။
ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ မြင်ကွင်းရှုခင်းကိုကြည့်ရင်း တွေးရတဲ့အချိန်က တစ်နေ့တာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဉီးနှောက်ကို အစာကျွေးရသလိုပါပဲ....။ ဒီလိုတွေးမိတော့ "အလုပ်နဲ့လက်မပြတ်အမြဲရှုပ်နေတဲ့ ခင်ဗျားမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး တွေးဖို့အချိန်တောင်ရှိရဲ့လား"လို့ ဖုန်းခေါ်တိုင်းမအားတတ်တဲ့ကိုယ့်ကို မှတ်ချက်ချသလိုပြောဖူးတဲ့ သူ့ကို သတိရမိသွားခဲ့တယ်....။
ဒီမှာလေကွယ်.....ကိုယ်အခု တွေးနေတယ်လေ.... ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ....။ မနက်ခင်းတိုင်း ကိုယ့်မှာ ဒီလိုတွေးဖို့ငေးဖို့ အချိန်ရှိနေပါတယ်....:)
သူ့အကြောင်းတွေးလက်စနဲ့ ကိုယ်ဟာ စာရေးတိုင်း ကျွန်မလို့ နာမ်စားသုံးလေ့ရှိပေမယ့် သူနဲ့စကားပြောရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာနာမ်စားမှမသုံးပဲ ကွေ့ပတ်ရှောင်ပြောတတ်တာကို သူရိပ်စားမိသလို ကိုယ်ဘာသာလဲ သတိထားမိခဲ့ပါတယ်....။
တကယ်တော့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေ အများစုက ကိုယ့်ကို မီ, မ, မမ, အစ်မ စသဖြင့်ခေါ်တတ်ကြသလို သူတို့ခေါ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဲဒီနာမ်စားအတိုင်းပြန်သုံးလိုက်တာပါပဲ...။ သူကတော့ကိုယ်နဲ့စကားပြောရင် ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲပြောနေကျမို့ ကိုယ်လဲ ဘာနာမ်စားမှ မသုံးဘဲပြောလိုက်တာပဲထင်တယ်....အဲလိုကြောင့်ပါ.....။
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ နမ်စားတစ်ခုခု ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့ လိုအပ်မယ်ထင်လား....?
အသားကျပြီးသားအသုံးအနှုန်းတွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ရော လွယ်ကူမယ်လို့ ထင်လား...?
ကိုယ်ကတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပတ်သက်ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ စိတ်ထဲပါတဲ့အတိုင်း လွတ်လပ်စွာသူ့အရှိတိုင်းပဲ တည်နေစေချင်တယ်.....။ ဆိုတော့ ကိုယ်တို့ ဒီပုံစံအတိုင်းလေးပဲ စကားဆက်ပြောကြတာပေါ့...။
ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာရလိုက်တဲ့ အတွေးတွေအတွက်ရော အသက်ဆက်ရှင်သန်ခွင့်ရနေသေးတဲ့အတွက်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....။
Posted by Cameron at 23:46 No comments:
Crumble Fruits and Nuts Cheese Cake
Sea Salt Cream Cheese Chiffon Cake
ကျွန်မတို့ရဲ့ အိမ်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသေးသေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ.....။ ဒီပို့စ်ကတော့ Commercial သီးသန့်ပို့စ်တစ်ခုပါပဲ.....။ ဒီကာလမှာ ဘာလုပ်လုပ်ခက်ခဲနေကြတယ်ဆိုပေမယ့် ဇိမ်နဲ့ထိုင်စားရဖို့ လူချမ်းသာမဟုတ်လို့ ဝမ်းတစ်ထွာအတွက် ကြံရဖန်ရတာပေါ့....။ ဒီ မုန့်ဖုတ်အော်ဒါကို တကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာက ကျွန်မရဲ့မောင်လေးပါ ကျွန်မကတော့ အကြံပေးတစ်ယောက်သက်သက်ပါပဲ....။ ပထမဦးဆုံး Brunt Cheesecake နဲ့စခဲ့တာပါ.... Face book မှာ Food Lover - Food Paradise လို့ရိုက်ထည့်ပြီးရှာလို့ရပါတယ်...။ ကျွန်မရဲ့ စာဖတ်သူများ အဝေးကနေအားမပေးနိုင်ရင်တောင်မှ ပေ့ချ်မှာ Like & Follow လေးလုပ်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်....။ Instagram မှာဆိုရင်တော့ foodlover_food paradise မှာလဲ Follow လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်....။ လောလောဆယ်အထိ မုန့်သုံးမျိုးကို‌ အော်ဒါလက်ခံပေးနေပါတယ်....။ Burnt Cheesecake ရိုးရိုး မျက်နှာပြင်တူးတဲ့ Cream Cheese အသားနဲ့ဆိမ့်နေတဲ့ ချိစ်ကိတ်ရယ်.....။ မူလ Burnt Cheesecake ပေါ်မှာမှ သစ်သီး(ပန်းသီး)စိပ်လေးတွေမြှုပ်ထားပြီး ဂျုံ ထောပတ်နဲ့ သကြားနယ်ထားတာကို အပေါ်ကနေဖြူးပြီးပြန် Bake ထားတဲ့ Crumble Cheesecake ရယ်.... Chiffon ကိတ်သားမွမွလေးပေါ်မှာ Cream Cheese, Sea Salt နဲ့ Icing Sugar နဲ့ ရောစပ်ထားတဲ့ Cream ကိုလောင်းပြီး သစ်သီးခြောက်နဲ့ အစေ့ဆံတွေဖြူးထားမယ့်ကိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်....။ အရသာကတော့ အိမ်မှာလုပ်စားတဲ့အတိုင်း အရည်အသွေးအပြည့်အဝနဲ့ စေတနာ မေတ္တာ အရင်းခံပြီး လုပ်ပေးမှာပါ....။
နောက်ထပ်ကြော်ငြာဝင်စရာတစ်ခုကတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆိုင်ပိတ်ထားရတဲ့ (Online မှာပဲရောင်း) CW ( Commune Wear ) ဆိုင်လေး ပြန်ဖွင့်ပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်....။ ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲကို ခုမှပြန်ဖွင့်ပေမယ့် တောက်လျှောက်တော့ အွန်လိုင်းနဲ့ရောင်းနေခဲ့ပါတယ်....။ စလုံးမှာနေတဲ့သူတွေအတွက် Commune Wear Singapore လို့ Google မှာရှာပြီး Website မှာ Explore လုပ် မိမိစိတ်ကြိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု မှာယူနိုင်ပါတယ်....။ အောက်ပုံတွေကတော့ Singapore ဆိုင်ခွဲမှာ တင်ထားတဲ့ ဖိနပ်တွေဖြစ်ပါတယ်....။ အခက်ခဲကြောင့် ရန်ကုန်မှာတော့ ဒီထဲကဖိနပ်ဒီဇိုင်းတစ်ချို့မတင်နိုင်သေးပါဘူး....။ Calf Leather စစ်စစ်နဲ့ Hand made ချုပ် ဖိနပ်လေးတွေပါ.....။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းနဲ့ကာလာပေးပြီး ထိုင်းမှာ အော်ဒါမှာချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်....။ ရန်ကုန်ဆိုင်ခွဲကိုလည်း Commune Wear Myanmar လို့ ရှာပြီး Website ကနေ အော်ဒါမှာနိုင်ပါတယ်.....။ သရေဖိနပ်တွေအပြင် ဖန်စီ နားဆွဲလှလှလေးတွေ ရင်ထိုးလေးတွေ Leather Card Holder တွေ သရေလက်ကိုင်အိတ်တွေ လက်ပွေ့အိတ်တွေနဲ့ ယောကျာ်းစီး ဖိနပ်တွေ တခြား Collaborate လာလုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ ယောက်ျားခေါင်းလိမ်းဆီတွေ ဂျယ်တွေ အမွှေးဖယောင်းတိုင်တွေ ပို့စ်စကဒ်လေးတွေ ချည်ပေါင်းသားအဝတ်အစားတွေလည်း အစုံရှိပါတယ်....။ မုန့်ရော တခြားလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေရော အားပေးကြပါ ချစ်တို့ရေ......။ အွန်လိုင်းဈေးသည်သံနဲ့ပြောကြည့်တာ....။ တောင်းဆိုတဲ့ Rating များရင်တော့ Face Book က Food Blogger တွေလို Live လွှင့်ပြီး Review အတွက် ကိတ်မုန့်တွေစားပြပါမယ်လို့ :)
Face Book သုံးတဲ့ စာဖတ်သူများလဲ ဒီပို့စ်လေးကို မိမိတို့ Wall တွေမှာ အပန်းမကြီးရင် ရှယ်ပေးလို့ရပါတယ်လို့.... Love You All …..❤️😍😻🥰
You tube မှာ ကိုကြီးကို Subscribe လေးလဲလုပ်ပေးကြပါဦး အယောက်တစ်ထောင်ပြည့်ရင် အကျိုးရှိတာလေးလုပ်စရာရှိလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 😍😍😍
Posted by Cameron at 22:03 No comments:
Hello December ❄️❄️❄️
Sweet December .... ပါ အိန်ဂျယ်ရေ ....
ဒီလိုမနှုတ်ဆက်ရတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့ပြီပဲ.....။
ဒီဇင်ဘာဟာ အရင်လို မြူတွေမဆိုင်းတော့ဘူး....
ဒီဇင်ဘာဟာ အရင်လို နှင်းတွေမဝေတော့ဘူး.....
ဒီဇင်ဘာဟာ သောကအပူမီးတွေ ဒုက္ခတွေဝေနေလို့ အရင်လို မချိုမြိန်တော့ဘူး......
ဒီဇင်ဘာမှာ မတရားဥပဒေတွေနဲ့ အမေ့ကို အမိန့်ချမှတ်မယ့် နေ့တစ်ခုရှိနေတယ်....
ဒီဇင်ဘာမှာ အခန့်မသင့်ရင် နာမည်အသစ်နဲ့ ဧည့်သည်လဲရောက်လာနိုင်သေးတယ်.....
ဒီဇင်ဘာမှာ Receiver ကောင်းကောင်းရှိတဲ့သူတွေဆီကို လှိုင်းတွေပို့လွှတ်ဖို့ ခါတိုင်းတွေထက် စွမ်းအားတွေကို ပိုစိုက်ထုတ်ရမယ်....
ဒါကြောင့် ဒီဇင်ဘာမှာ စွမ်းအင်တွေကို ပိုစုဆောင်းရမယ်.....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခါတိုင်းနှစ်တွေလို မချိုမြိန်တော့ပေမယ့်... ဒီဇင်ဘာဆိုတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလမှာ စေတန်ရဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေအားလုံး အားလုံး အဆုံးသတ်နိုင်မယ့် လဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်.....။
Sweet December မှာ မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံး ပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် ... ။
Posted by Cameron at 05:33 No comments:
နမောတသ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုသတ္တာ
ငါးပါးသီလ လုံခြုံ အောင် စောင့်ထိန်းပါ
ငါးပါးသီလကို ဝါရိတ္တသီလလို့ ခေါ်တယ်။
တစ်ပါးမှ လျော့လို့ မရဘူးနော်။
ပါဏာတိပါတကံ မလုံခြုံ ခဲ့ ရင်
ဒါက အပေါ့ဆုံး အပြစ်နော်။
ငရဲကျတာ မကျတာ အသာထားနော်။
အာဒိန္နာဒါနကံ မလုံခြုံ ခဲ့ ရင်
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ ရှာလို့တော့ ရပါရဲ့။
ကိုယ်ရဲ့ပစ္စည်းဟာ အမြဲတမ်း ပျက်စီးနေမယ်။
နောက်တစ်ခု ကာမေသု မိစ္ဆာစာရ ကံ
သူ့မျက်နှာမြင်တာနဲ့ အလိုလို မုန်းလာတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ကျား မဟုတ်
မ မဟုတ် ဖြစ်တတ်တယ်။
မုသာဝါဒ ကံ မလုံရင်
သူ့ရဲ့စကား အရာ မရောက် ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် မုသားဆို ရယ်စရာအနေနဲ့တောင်
သုရာမေရ ကံ မလုံခြုံ ခဲ့ တဲ့ သူဟာ
ဖြစ်ရာဘဝမှာ ဦးနှောက် မပြည့်ဘူး။
ငါးပါးသီလထဲက တစ်ခုမှ လျော့လို့ မရဘူး။
အနာကင်းရမယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ရှိရမယ်။
ငါးပါးသီလ လုံခြုံရင် အဲဒီအကျိုးတွေ ရမယ်။
ဒါမှ လူ့ဘဝမှာ ပြည့်စုံသူလို့ ပြောလို့ရမယ်။
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ
Posted by Cameron at 15:10 No comments:
ပုန်းတမ်းကစားနေတဲ့ နေဝန်းနီ ညနေ
အိမ်လုပ် Cold Brew လေး သောက်ပါဦး
ကျွန်မတို့အိမ်က အနောက်လှည့်မို့ ညနေ နေဝင်ချိန်ဆို သိပ်လှတဲ့အကြောင်း သူ့ကိုပြောပြဖြစ်တယ် ....🔆🌻🎶❤️🎵🌺
Posted by Cameron at 07:28 No comments: